Ukudityaniswa kweefoto kunye nemizobo yealreal nguAliza Razell | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kwiminyaka engamashumi amabini ananye, igcisa UAliza razell Uzama iindlela ezahlukeneyo zokudala imisebenzi yakhe yobugcisa. Udibanisa ukuthanda kwakhe okukhulu, ukufotowa kunye imifudlana. Njengoko evuma ngokwakhe, unesidingo esivuthayo sokwenza.
Imifanekiso iyinxalenye yamacandelo amabini akutshanje. Ukubulala iintlungu, Iquka Imbali yebhokisi yepandora, Ikhuthazwe ngumlingo wokujongana. Eyesibini iphefumlelwe ligama lesiFinnish 'ikävä'Oko kukuthi, imvakalelo yokunqongophala komntu okanye into.
Sebenzisa iifoto (ubukhulu becala iifoto ezizimeleyo) kunye ne-watercolors, umzobi u-Aliza Razell uye waphonononga amabali ahlukeneyo ngokudibanisa aba babini Photoshop. Ungayibona ngakumbi imisebenzi yakhe kuyo yonke Flickr, kwaye unokuba nomdla wokwazi malunga URazell, Ngubani udade omdala womfoti oselula.
Ezona ndlela zimbini zibalaseleyo zokubamba ubuhle kukufota kunye nokupeyinta i-watercolor, kodwa kwenzeka ntoni xa zidityanisiwe kuyamangalisa. Ukusetyenziswa kwee-watercolor, uAliza wongeza ukuqhuma kwemibala Ukutsiba ezandleni zakhe, okanye uyafumana amaphiko engelosi. Umdibaniso uvelisa imifanekiso ezele yimvakalelo ebonakalayo. Ungabona ngaphezulu kwemisebenzi yakhe kwiFlickr, eya kuthi ikushiye ekupheleni kwenqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Indibaniselwano ka-Aliza Razell yeefoto zesrealism kunye nemizobo